Akụkọ - fbọchị Ngwá Agha mba
November 9th bu ubochi nke China nke Firefighting. Ihe ọ pụtara bụ ịdọ ndị mmadụ aka ka ha nwee mmata nchedo ọkụ ma cheta ndị dike anyị - ndị ọrụ ịgbanyụ ọkụ.
ALUTILE Brand All Dimensional Aluminium Isi Panel mejupụtara atọ n'ígwé nke aluminum mpempe akwụkwọ, nke adopts tozuru okè na pụrụ iche bonding technology, na ire ere ọnụego nke bee na-erughị 5% na 20 afọ.
Klas na-eguzogide ọkụ nwere ike iru Fire Class A2 dị ka kwa GB8624-2012 na EN13501, ebe ọ bụ na ngwaahịa ahụ kwadoro 100% usoro Aluminom. N'ihi nke a, ndị ahịa nwere ike ịnwe mmụba nchekwa dị elu karị.
All Dimensional Aluminium Core Panel na ọtụtụ-eji na mma nke elu-ọgwụgwụ metal ákwà mgbochi mgbidi nke ọha na eze na ụlọ azụmahịa dị ka ọdụ ụgbọ elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè, ụzọ ụgbọ oloko ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ngosi ihe mgbe ochie, na-edebe ihe ochie, ngosi center, azụmahịa mgbagwoju, elu-ọkwa ọkwa ụlọ , nkwari akụ, wdg.
ALUTILE Ikike All Dimensional Aluminium Core Panel idota nchekwa gị.